Sheekh Shakuul "Madaxweyne Xasan haka ilaaliyo dowladda Wasiir... | Universal Somali TV
Sheekh Shakuul "Madaxweyne Xasan haka ilaaliyo dowladda Wasiirada jikada"
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah Guddiga Culimada iyo Ganacsatada Soomaaliyeed ee Magaalada Nairobi ayaa Madaxweynaha cusub ee Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in uu dowladda ka ilaaliyo waxa uu ugu yeeray milkiile iyo Wasiirada aan muuqan ee ka barbar shaqeeya Golaha Wasiirada ee Xukuumadda.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka hadlayay kulan ka dhacay Magaalada Nairobi, talooyina loogu soo jeedinayay Madaxweynaha ayaa sheegay in Somaliya ay maanta u baahan tahay dad tayo leh oo ammaanadana ku wanaagsan.
"Waxaa loo baahan yahay oo Madaxweynaha laga doonayaa in ummadda la horkeeno dad tayo leh oo caqli, cilmi, khibrad, ammaano, diin iyo wanaag u saaxiib ah." Ayuu yiri Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul.
Waxa kaloo uu yiri "Madaxweynuhu hadda ka hor Madaxweynuu soo noqday, khibrad badan buu leeyahay, waxaa laga yaabaa afartii sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg, laakiin maanta waxaan u maleynayaa Madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona. Waxaan leeyahay wixii ka khaldoomo waa wuxuu ula kacay hadda ka dib."
Isaga oo hadalkiisa sii wato ayuu yiri "Waxaan rabnaa oo Madaxweynaha aan kula dardaarmaynaa laba arrimoodba inuu ka ilaaliyo dowladda, si ay u guuleysato. Waxaa jiro wax la yiraahdo (Kitchen Cabinet), Wasiirada iyo Xukuumadda, xukuumad aan ahayn oo jikada ka shaqeysa, kuwa dadka la horkeenayna ay iska yihiin tusaale, bay Somaliya in badan oo ka mid ah ku soo shaqeynaysay. Dad gaar ah ayaa talada badanaa maamula, kuwaana wax la soo kariyay weeye, sida jikada markii la galo wax la soo kariyay uun baa laguu keenaa oo cuntadii oo bisil ah, wax laga sameeyayna ma garaneysid. Marka Golaha Wasiirada ee jikada halaga ilaaliyo dowladda iyo waxa la yiraahdo milkiile in iyadana laga ilaaliyo."
Sheekh Shakuul ayaa intaasi raaciyay "Milkiiluhu waa Soomaali oo dhan, kulligeena milkiilayaal baanu nahay soo maaha? Ma noqon karo qof gaar ah milkiile inuu dalkan ku tasarufo, sidii soo dhici jirtay, taa waa inay meesha ka baxdaa."
Kan-xigaGudoomiyaha Degmada Baraawe oo mooshi...
Kan-horeMadaxweyne Xasan Sheekh oo magacaabay...
65,220,777 unique visits